Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.3.3 Cost
Fanadihadiana dia tsy afaka, ary izany no tena tery.
Hatreto dia efa nodinihiko vetivety ny rafitra fandalinana tanteraka ny fanadihadiana, izay izy no lohahevitra momba ny fitsaboana boky lava (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Na dia feno aza io rafitra io, dia matetika no mahatonga ny mpikaroka tsy hijery anton-javatra lehibe: fandaniana. Na dia farafaharatsiny aza ny mpikaroka mpikaroka momba ny fotoana sy vola, dia sarotra be ny tsy tokony hohadinoina. Raha ny marina, ny vidiny dia fototry ny dingana manontolo amin'ny fikarohana (Groves 2004) : io no antony mahatonga ireo mpikaroka hanadihady olona samihafa fa tsy vahoaka iray manontolo. Ny fanoloran-tena tokana ho an'ny fihenanam-pitenenana raha tsy miraharaha ny fandaniana dia tsy voatery mahaliana antsika foana.
Ny fetran'ny fionganan-tsaina amin'ny fampihenana ny fahadisoana dia asehon'ny tetikasa fanta-daza an'i Scott Keeter sy ireo mpiara-miasa (2000) momba ny fiantraikan'ny asa an-jorom-bala amin'ny fihenan'ny tsy fitongilanana amin'ny fanadihadiana an-telefaona. Keeter sy ireo mpiara-miasa dia nitarika fianarana roa samihafa, iray amin'ny fampiasana fomba fiasa "standard" fampandehanana ary iray amin'ny fampiasana "henjana" fitsaboana fandraisana mpiasa. Ny fahasamihafana eo amin'ireo fianarana roa ireo dia ny habetsaky ny ezaka izay nifandray tamin'ireo olona namaly ary namporisika azy ireo handray anjara. Ohatra, nandritra ny fanadihadiana natao tamin'ny "fanamafisana" ny mpikaroka, dia nantsoin'ny mpikaroka matetika ireo fianakaviana voapoizina sy nandritra ny fotoana lava kokoa ary nanao antso an-telefaonina fanampiny raha nandà tsy handray anjara ny mpandray anjara tamin'ny voalohany. Ireo ezaka fanampiny fanampiny ireo dia nahatonga ny taham-pitenenana ambany kokoa, saingy nampiakatra ny vidin'izany izy ireo. Ny fianarana mampiasa fomba "henjana" dia avo roa heny noho ny lafo ary avo folo heny. Ary, tamin'ny farany, ny fianarana roa dia novolavolaina tamina fiheverana mitovy. Ity tetikasa ity, ary koa famerenana mamaky amin'ny fikarohana hafa (Keeter et al. 2006) , dia tokony hitarika anao hanontany tena hoe: moa ve isika tsara kokoa amin'ny fanadihadiana mety roa na fanadihadiana iray tsy misy dikany? Ahoana ny amin'ireo fanadihadihana mety 10 na fanadihadiana tsy misy dikany? Ahoana ny momba ny fanadihadiana sahabo 100 na ny fanadihadiana iray tsy mitongilana? Amin'ny lafiny iray, ny tombontsoa sarobidy dia tsy maintsy mandanjalanja ny vahaolana tsy dia mazava loatra momba ny kalitao.
Araka ny asehoko ato amin'ity toko ity, maro amin'ireo fahafahana noforonina tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny dizitaly dia tsy midika ho fanombatombana fa misy hadisoana kely. Ireo tombontsoa ireo kosa dia ny manombantombana ny isa isan-karazany sy ny fanaovana tombanana haingana sy mora kokoa, eny fa na dia mety ho diso aza. Ireo mpikaroka izay misisika amin'ny fisainana tokana amin'ny fanamaivanana ny fahadisoana amin'ny fandaniam-bola hafa dia tsy manadino ireo fahafaha-manao mahafinaritra. Raha jerena io lohahevitra io momba ny rafitra fanadihadiana tanteraka, dia hitodika amin'ny faritra telo amin'ny vanim-potoana fahatelo momba ny fanadihadiana isika: fomba fanao vaovao hisolo tena (fizarana 3.4), fomba fanao vaovao (fizarana 3.5), ary paikady vaovao hampiarahana ny fanadihadiana miaraka amin'ny loharanom-baovao lehibe (fizarana 3.6).